कार्यकारी जिम्मेवारीमा वामदेवको इन्ट्री, के होला नेकपाको समीकरण ? - Everest Dainik - News from Nepal
कार्यकारी जिम्मेवारीमा वामदेवको इन्ट्री, के होला नेकपाको समीकरण ?
तर वामदेव मुडभेडको यो जटिल अवस्थामा जाने सम्भावना देखिँदैन किनभने उनी आफुसँग बलियो संगठन नभएको अवस्थामा पार्टीभित्र समन्वयको साटो विग्रह र स्पष्ट गुट या कित्ताबन्दीमा जाँदा उनको भविष्य सुरक्षित नहुने उनले विश्लेषण नगर्लान भन्न सकिन्न ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सचिवालय बैठकले यसअघि स्थायी समितिको बैठकको निर्णयलाई अगाडि बढाउने सहमति व्यक्त गरेपछि राजनीतिमा नयाँ तरङ्ग थपिएको छ ।
नेकपा स्थायी कमिटिको बैठकले यसअघि नै वामदेव गौतमलाई उपाध्यक्ष र राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउने निर्णय गरेको थियो । यद्यपी परिस्थिति अनुकुल नहुँदा र अध्यक्ष ओलीको सहमति नभएका कारण (?) उक्त निर्णय कार्यान्वयन भने हुन सकेको थिएन ।
तर यसअघि नै राष्ट्रीय सभाकाे अवधि सकिएका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको स्थानमा सहमति जुटाउनै पर्ने बाध्यता नेकपा सामु आएपछि पुरानो निर्णयमा सहमति जुटेको थियाे ।
परोक्षरुपमा प्रचण्डलाई फाइदा
वामदेव गौतमको गुनासो जहिल्यै पनि अधिकारसहितको जिम्मेवारी नपाएको रहँदै आएको छ । बर्दियाबाट निर्वाचन लडेका वामदेवले आफूलाई नियोजितरुपमा केपी ओली समूहले हराएको बताउँदै आएका थिए । निर्वाचनमा पराजित हुँदा र पार्टीभित्र पनि कार्यकारी भूमिका नहुँदा वामदेवभित्र छटपटी उत्पन्न हुनु स्वभाविकै थियो ।
वामदेवको इतिहास हेर्दा उनी हक्की स्वभावका नेताका रुपमा लिइन्छन् । पछिल्लो समयमा जिम्मेवारी या अर्को अर्थमा पदका लागि उनले दायाँ, बायाँ सम्झौता गर्दै गएकोमा आलोचना खेपेपनि एजेण्डाका हकमा भने उनले आफ्नो अडान नत्याग्ने नेताका रुपमा इतिहासले सम्झिन्छ ।
तत्कालिन अवस्थामा यही एजेण्डाका आधारमा उनले नेकपा माले नाम अलग्गै पार्टी समेत बनाए । यद्यपी कालान्तरमा उनले त्यसलाई जोगाउन सकेनन् र पुनः एमालेसँग एकता गरे ।
यतिमात्रै होइन, माओवादी जनयुद्द उत्कर्षमा पुगेको बेला वामपन्थी र गैर वामपन्थी सरकारहरुको निशानामा सशस्त्र युद्द थियो । अहिले विप्लवहरुलाई राज्यले व्यवहार गरेजस्तो त्यतिखेर एमाले र माओवादी वर्ग दुश्मन थिए । तर त्यो अवस्थामा पनि वामदेवको सहानुभूति तत्कालिन माओवादीसँग थियो । यही क्रममा
उनी माओवादीका शीर्ष नेता भेटन रोल्पा नै पुगे । यो कुरामा उनले पार्टीभित्र आलोचना खेप्नु पर्यो ।
याे पनि पढ्नुस एमसीसी पारित गर्नुपर्छ भनेको छैनः भीम रावल
माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएदेखि संविधान निर्माणको बेलासम्म वामदेवले अग्रगामी एजेण्डाकै पक्षमा आफूलाई उभ्याए । कतिपय तत्कालका मुद्दामा माओवादीको आलोचना गरेपनि मूलतः उनको अडान यथास्थिति विरुद्ध नै रह्यो ।
त्यसैले नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले वामदेवमा बेलाबखत देखा पर्ने दक्षिणपन्थी रुझानका बारेमा बहस चलिरहँदा भन्ने गरेका थिए– व्यक्तिलाई एउटा घटनाका आधारमा मूल्यांकन गर्नु हुँदैन बरु समग्रतामा अध्ययन गरिनु पर्दछ । वामदेवले कतिपय कालखण्डमा विचलन देखिएपनि मूलतः उनको भूमिका अग्रगामी नै छ ।
भलै पछिल्लो चरणमा वामदेवले आफू कुनै कित्तामा नरहेको बताएपनि विगतमा उनको भूमिका हेर्दा उनले यथास्थितिवादको बिरोध गर्ने नै देखिन्छ ।
सम्भवतः यही बुझाई भएर होला, पछिल्लो समय वामदेव भूमिकाविहिन भएको बेला उनलाई अध्यक्ष र राष्टिन्य सभामा ल्याउन प्रचण्डको निकै जोडबल रह्यो । जबकि पूर्व एमाले समूहबाट भने वामदेवलाई प्रतिनिधि सभामा ल्याउने योजनाविरुद्ध षडयन्त्र भएको वामदेव नै बताउँछन् । डोल्पा र काठमाडौंबाट निर्वाचन लडेर प्रतिनिधि सभामा जाने उनको सपना यही कारण पुरा हुन सकेन ।
पछिल्लो चरणमा स्थायी कमिटि बैठकले वामदेवलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने निर्णय गर्यो । प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी ओली पनि त्यसमा सहमत नै थिए । तर उनी केही दिनमा नै वामदेवलाई लैजाने निर्णयबाट पछि हटे । यो अवस्थामा चितवन पुगेका प्रचण्डले वामदेव जसरी पनि राष्ट्रिय सभामा लैजानुपर्छ भनेर दबाब दिने काम गरे ।
अन्ततः नेकपा सचिवालय बैठकले वामदेवलाई लैजाने निर्णय गर्यो । कतिपयले ओली र वामदेवबीच सहमति भएर या ओलीका पक्षमा वामदेव उभिने सहमति गरेर निर्णयमा सर्वसम्मति जुटेको दावी गरेपनि मूलतः यो प्रचण्डले अघि सार्दै आएको एजेण्डाको विजय नै देखिन्छ । भलै पछिल्लो चरणमा वामदेवले आफू कुनै कित्तामा नरहेको बताएपनि विगतमा उनको भूमिका हेर्दा उनले यथास्थितिवादको बिरोध गर्ने नै देखिन्छ । यो भनेको नेकपाभित्र अग्रगामी र पश्चगामी एजेण्डाका बीचमा वामदेवले अग्रगामी एजेण्डा समर्थन गर्नुे अवस्था सिर्जना हुनु हो ।
याे पनि पढ्नुस राजीनामा दिएर आराम गर्नुस्ः वामदेव, कसले कसरी हटाउँछ ?: ओली
वामदेवको अबको भविष्य
वामदेवको कार्यकारी उपस्थितिबाट उनको भविष्यका बारेमा मूलतः तीनवटा सम्भावनाबारे अहिले चर्चा चलिरहेको छ । पहिलो, वामदेव अब अध्यक्ष ओली नेतृत्वको सरकारमा जान्छन् । उनले उपप्रधानमन्त्री तथा गृह मन्त्रालय या अर्थ मन्त्रालय पाउँछन् । यद्यपी वामदेवले यो विषयमा केही बोलेका छैनन् । यसो भएको खण्डमा ओली सरकारमा ओलीपछि सबैभन्दा बढी राजनीतिक उचाई भएका नेताका रुपमा वामदेव रहनेछन् । संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्री नै मुख्यतः प्रभावशाली हुने भएपनि वामदेवको उपस्थिति प्रधानमन्त्रीले एकलरुपमा अघि बढ्ने स्थितिको अन्त्यका रुपमा कतिपयले लिएका छन् । यसबाट सरकारको प्रभावकारितामा समेत फरक पर्ने देखिन्छ । सत्ता चलाएको अनुभव भएको र हाकाहाकी स्वभावका कारण कर्मचारीतन्त्रमा समेत वामदेवको उल्लेख्य प्रभाव हुने, मन्त्रीपरिषदका निर्णयहरुमा प्रभाव पर्ने सामान्य आँकलन गर्न सकिन्छ ।
कतिपय विषयमा उनी दायाँ बायाँ हुनसक्ने सम्भावना रही रहेपनि मूलतः प्रचण्डको समाजवादतर्फको राजनीतिक ‘मुभ’मा वामदेव सहयोगी नै रहने सम्भावना देखिन्छ ।
दोश्रो, अबको महाधिवेशनमा वामदेव गौतमले विचार समूहको नेतृत्व गर्ने दावी पनि कतिपयले गरेका छन् । नेकपाभित्र पूर्व विचार समूहको मनोविज्ञानको नेतृत्व गराउने कोशीस ओली पक्षले लामो समयदेखि गर्दै आएको छ । खासगरी पूर्व माओवादी समूहसँग विवाद पर्दा जबजको संवेदना बेलाबखत उजागर गरिन्छ पनि । अर्कोतर्फ पछिल्लो समय ओली र वामदेवबीचको सम्बन्ध सुधार हुनु, पार्टीमा गम्भीर विवाद भएको बोल ६ बुँदे सुझाव अघि सारेर पार्टीमा नयाँ तरंग सिर्जना गर्नु जस्ता घटनाले वामदेवलाई ओलीले आफ्नो विचार समूहको नेतृत्वकारी भूमिकाको रुपमा अघि सार्ने अडकलबाजी कतिपयले गरेका छन् ।
तर महाधिवेशनमा वामदेवले त्यसरी ओली समूहको एजेण्डा र विचारको नेतृत्व गर्ने कुरा कम्तीमा वामदेवको स्वभावले भने दिँदैन । अबको महाधिवेशनको मूल विषय नेपाली क्रान्तिको कार्यदिशा हो । नेपाली क्रान्तिको कार्यदिशा निर्धारण गर्दा इतिहासको समीक्षा गर्ने र यसअघि दुबै पार्टीका दस्तावेजको संश्लेषण गरेर नयाँ कार्यदिशा निर्माण गर्ने विषय हो । तसर्थ मूलतः एकताको महाधिवेशन नै भएकाले कार्यदिशामा सहमति खोजिने र सहमति नजुटेको खण्डमा वामदेव र माधव नेपालहरु प्रचण्डको विचारसँग सहमत हुने सम्भावना बलियो देखिन्छ । यदि त्यसो नभएर उनी ओली समूहको निरन्तरतामा भविष्य खोज्ने अवस्थामा अल्पमतमा पर्ने अवस्था देखिने भएकोले पनि यो अडकलबाजि पुरा हुने दिशामा वामदेव जाने सम्भावना देखिन्न ।
वामदेवलाई प्रचण्डलाई काउण्टर दिन सरकारमा कार्यकारी भूमिका सम्भवतः प्रधानमन्त्री दिने सहमतिको हल्ला पनि हो ।
याे पनि पढ्नुस विश्वकै तेस्राे ठूलाे 'कम्युनिष्ट' पार्टी नेकपाका यी हुन् ४४१ केन्द्रीय सदस्य, नामसहित
तेश्रो सम्भावना वामदेवलाई प्रचण्डलाई काउण्टर दिन सरकारमा कार्यकारी भूमिका सम्भवतः प्रधानमन्त्री दिने सहमतिको हल्ला पनि हो । नेकपामा पछिल्लो समयमा विवाद चर्किएपछि ओलीले राजिनामा दिनुपर्ने र त्यसको स्थानमा प्रचण्ड या माधव नेपालमध्ये एकजना प्रधानमन्त्री बन्ने चर्चा निकै चल्यो । यस्तो अवस्था आउन नदिन वामदेवलाई उक्त विकल्पमा अघि सार्ने कसरत ओली समुहले गरेको भन्ने अडकलबाजी पनि कतिपयले गरेका छन् ।
वामदेवको कार्यकारी उपस्थिति नेकपाका लागि सकारात्मक कुरा हो । राष्ट्रियता र जनजीविकाको पक्षमाले उनले आजसम्म सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन् ।
तर वामदेव मुडभेडको यो जटिल अवस्थामा जाने सम्भावना देखिँदैन किनभने उनी आफुसँग बलियो संगठन नभएको अवस्थामा पार्टीभित्र समन्वयको साटो विग्रह र स्पष्ट गुट या कित्ताबन्दीमा जाँदा उनको भविष्य सुरक्षित नहुने उनले विश्लेषण नगर्लान भन्न सकिन्न । त्यो अर्थमा कतिपय विषयमा उनी दायाँ बायाँ हुनसक्ने सम्भावना रही रहेपनि मूलतः प्रचण्डको समाजवादतर्फको राजनीतिक ‘मुभ’मा वामदेव सहयोगी नै रहने सम्भावना देखिन्छ ।
तर जे होस्, वामदेवको कार्यकारी उपस्थिति नेकपाका लागि सकारात्मक कुरा हो । राष्ट्रियता र जनजीविकाको पक्षमाले उनले आजसम्म सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन् । कतिपय अवस्थामा उनीमा कार्यनीतिक विचलन (भावनाको प्रधानता) देखिने भएपनि उनको समग्र जीवन अग्रगमनकै पक्षमा अघि बढेको छ । उनले क्रान्तिको सपना मारेको देखिँदैन ।
ट्याग्स: नेकपा, वामदेव गाैतम